Nolosha Magaalada Uppsala
﻿Warbixintani waxay kheyb katahay barnaamijkii aan ugu tala galnay in aan kaga warano nolosha kamuunada Sweden.
Uppsala waa magaalo qadiimi ah, oo taariikh aad u weyn iyo sumcadba ku dhex leh wadanka Sweden iyo dhamaanba dunida reer galbeedka waana magaalada afaraad ee ugu weyn wadanka Sweden. Uppsala 70 KM bay dhanka waqooyi oga beegantaha caasimada Sweden, ee Stockholm waxaana ku nool dad gaaraya 144,839.
Sanadadiin dambe Uppsala waxay soo dhaweysey soo galooti aad u badan, inkasta oo aysan la mid ahayn magaalooyinka kale ee Sweden. Inta badan dadka aan asalkoodu Swedish-ka ahayn waxay daganyihiin xaafada Gottsunda, oo qiyaastii 7 Km dhanka konfur-galbeed uga beegan bartamaha magaalada. Waana xaafad ku caan baxda rabshado is daba joog ah oo ay dhalinyaradu sameeyaan.
bilihii ugu dambeeyana waxay noqotay meel warbaahinta Uppsala si gooni ah isha ugu hayso.
Barasha luuqada soo galootiga (SFI)
Magaaladaan ku faanta in ay tahay xarunta waxbarashada wadanka Sweden waxay ku marti qaaday dadka u soo haajiray, oo isugu jira nolol doon iyo wax barasho raadisba wax barasho si wanaagsan loo agaasimay. Waxaa albaabada loo furay sadex iskuul oo lagu barto luuqada Swedhishaka gaar ahaan marka dadku wadanka ku cusubyihiin, ayadoona waliba loo qaybshay sadex qaybood.
Qofkii sheegtay in uu dugsiga sare soo dhameeyey ama jaamacad galay wuxuu aadaa iskuulka Hermods, oo ah iskuul si deg-deg ah wax la iskugu baro inta badana ardaygu markii uu luuqada fahmo loo sheego in uu asagu wax isi sii baro, oo uu kaalin ka qaato waxbarashadiisa, ama hadii aan si kale u dhigo waxaa ardayga la siiyaa casharo badan oo aan fasalka dhexdiisa lagu dhamayn karin si uu guriga ugu soo akhristo.
Lernia, waa kan labaad waxaana loo diraa dadka intii sharci la’aanta ay ahaayeen si fiican luuqada u fahmay ama wadan koodii wax barasho asaasi ah kala yimid gaar ahaan luuqada Ingiriisga qofkii garanaya.
Linne, waa kan ugu dambeeya waxaan aalaaba aada dadka sheegtay in aysan waxba horay u soo dhigan wuxuuna kuwa kale dheeryaha ayadoo dadka dhigta la baro wax yaaba badan oo aas-aasi ah sida culuumta computer-ka oo aas-aasi ah iyo Afka hooyo luuqadana waxaa loo baraa si gaabis ah.
Good ahaan waxaa la dhihi karaa Uppsala aad bay u adagtahay in aad guri hesho xiliyada caadiga ah, lakin xiliga xagaaga ah waxaa caado ah in la helo guryaha ardayda ilaa 3 bilood taasi oo ay sabab u tahay in aysan hay’ada ardad kaal maysa lacag siin ardayda xiliga fasaxa.
In badan baa hadii ay Uppsala guri ka helaan lacag ka samaysa waxuuna gurigu ka leeyahay Uppsala laba Faa’iido , oo kala ah in aad ku noolaato iyo waliba in aad nolosha u kaalmaysato oo xoogaa qarashihi kaa soo galo.
Shaqada iyo Praktiiga
Guud ahaanba ayadoo dhibaatadii dhaqaale ee caalamka hardiday diifteedii lala sii dhutinayo hadana wadanka aan ku nool nahay ee Sweden malahan siyaasad shaqo, oo lagu wada qanacsanyahay. Sikastaba ha ahaatee shaqadu badanaa waxa ay ku xirantaha calaf iyo qofka kartidiisa shaqo raadineed Uppsala iyo dhamaanba Sweden.
Ma jirto magaaladan Somali badan oo shaqo u dareerta aroortii dhawr sababood dortood waxaase aad u soo batay shaqada bilaashka ah, oo loo yaqaan partaktiga, ayadoona shardi looga dhigay arday kasta oo luuqada dhamaynaya intuusan dhamayn ka hor in uu soo sameeyo 3 bilood oo praktig ah.
Islamka iyo Muslimiinta
Magaalada Uppsala waxaa ku yaal masaajid weyn oo aad u qurxoon halkaas oo muslimiintu ku cibaadaystaan maalin walba si aad ahna jimcada loo soo camiro.
Bishii barakaysneyd ee Ramadaan masjidka Uppsala qofkii ku tukan jiray waxaan dhihi karaa wuxuu dib u soo xasuustay masaajidii ku tiilay dunida Islaamka.
Waxaana salaada ka bixin jiray muslimiinta laba wiil oo Qur’aanka xifdisan lagana keenay Bariga dhexe .
Masaajidka magaaladan waxuu oga badalan yaha masaajidii geeska Afrika, asagoo fuliya adeegyo kala duwan, sida asagoo da’yarta u sameeya maaweelooyin diini ah, Quraan xifdis, tartamo iyo ku dhawaad dhamaan wixii jaaliyadi qaban lahayd waxaana gacan ka gaysta hawshaas fir-fircoonayaal loo igmaday loogana dambeeyo hawshaas. Muslimiinta magaladana waa mulimiin ilaa xad diinta iyo caqligu u taliyo.
Nolosha iyo Dhaq-dhaqaaqa magaalada
Magaaladan waxay xiriir dhaw oo dhanka nolosha ah la leedaha magaalo madaxda wadankan, Stockholm waxaan looga nool yaha nolol tan caasimada taala aan waxba ka badal nayn marka laga reebo in aysan lahayn tareenka dhulka hoostiisa xula.
Waxaa jira tareen dheereeya oo ka dhex shaqeeya labadan magaalo wuxuuna u kala socda 45 daqiiqo qiimo jaban baana lagu raacaa.
Magaaladu waxay leedaha dhamaan wax yaabaha fududeeya nolosha casriga ah waxaana jira arin si weyn la iskula dhex maryo oo ah in 2011 tareenka Stockholm la soo gaar siin doono magaaladan, taas oo macnaheedu yahay in SL-ka Stockolm la iskaga dhex goosho Uppsala-na uu ka dhex shaqayn doono ayadoo ay horeyba u jirtay kaar 1500 kr ah oo labada magaalaba ka dhex shaqeeya.
Warbixintaan qiimaha leh waxaa soo diyaariyay Saciid Cabdi Cusmaan oo ah wakiilkeena magaalada Uppsala.
Haddii aad jeceshay in aad nooga soo waranto nolosha kamuunkaaga halkaan riix